I-Easy Multi Display User Guide V2 - Ukuboniswa okulula okulula
Idalwe Qalile 20 / 12 / 2019
3. Izincwadi Zomsebenzisi
Senze izinguqulo ezimbili zomhlahlandlela wethu womsebenzisi ukuze senze kube lula ukusebenzisa i-Easy Multi Display. uma ukhetha ukufinyelela kwi-User Guide ungaxhunywanga, unganqikazi ukulanda ifayela le- Umhlahlandlela womsebenzisi we-Easy Multi V2 lapha:
I-Easy Multi Display User Guide Version 2 (En)
I-Easy Multi Display Guide Guide Version 2 (Fr)
I-Easy Multi Display Guide Guide Version 2 (CH)
I-Easy Multi Display Guide Guide Version 2 (ES)
Kungani kufanele ngilande lo mhlahlandlela womsebenzisi?
Kunezizathu eziningana zalokhu! Okokuqala, akuyona inkomba yomsebenzisi elula, ingaphezu kwalokho, uzothola izinsiza eziningi ezizokusiza ukuthi uzuze kakhulu kusoftware yethu ye-Easy Multi Display. Okwesibili, uma uyilanda manje, ungayisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuyilanda futhi. Ekugcineni, uzokwazi ukufinyelela kumakhasi angama-75 kufaka phakathi usizo lokufaka, izindatshana zethu ze-FAQ, ezinye izifundo zokukusiza ukuthi usebenzise isoftware yethu ngqo kuleli fayela!
Ithebula lokuqukethwe le-EMD
Ithebula le-EMD lokuqukethwe 2
IVERO Studio idala ihlathi lokuntywila ku-C4's Lucy, imfene yabantu
Isikrini se- "China enkulu" esingu-5mm se-LED sikhombisa ama-24K "3D" abukwayo
Izikrini ze-LED eziphakeme ukukhanyisa inkundla yaseSt